CPEC က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အတွက် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား - Xinhua News Agency
CPEC က ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ အတွက် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြား
အစ္စလာမ်မာဘတ် ၊ မေ ၂၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် အီမရန်ခန်း(Imran Khan)က တရုတ်-ပါကစ္စတန်စီးပွားရေးစင်္ကြံ(CEPC) သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသာမက ဒေသတွင်းတစ်ခုလုံးအတွက်လည်း ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မေ ၂၃ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ပါကစ္စတန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံအကြား အခြေအနေအားလုံးတွင် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးသည် မကြုံစဖူးထူးကဲကြောင်း CPEC စီမံကိန်းများ တိုးတက်မှု နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်သော အစည်းအဝေးတွင် ဥက္ကဌအဖြစ် ဆောင်ရွက်စဉ် ဝန်ကြီးချုပ်က အထက်ပါအတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါဆက်ဆံရေးကို ခိုင်မာသောစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုအဖြစ် ကူးပြောင်းရန် ၊ ယင်းအား နှစ်ဖက်အကျိုးရှိသော နယ်ပယ်များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် လိုအပ်သည့် တွန်းအားပေးရန် နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အားလုံးသော ဖြစ်နိုင်သမျှ မက်လုံးများဖြင့်စွဲဆောင်သွားရန် တို့ကို ဝန်ကြီးချုပ်က မီးမောင်းထိုးပြောကြားခဲ့သည်။
အစည်းအဝေးအတွင်း ဝန်ကြီးချုပ်ခန်းက CPEC လက်အောက်တွင်လုပ်ကိုင်နေသည့် အထူးစီးပွားရေးဇုန် လုပ်ငန်းများအပေါ် ကျေနပ်အားရကြောင်း ၊ ယင်းသည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ၏ စက်မှုကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ပေးရန် မျှော်လင့်ပြီး နိုင်ငံအနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပိုမိုစွဲဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ရုံး၏ ကြေညာချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
တရုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် အစိုးရ၏ စီမံဆောင်ရွက်ပေးမှုများအပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ယင်းတွင် ကြုံတွေ့ရသော ပြဿနာရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးချုပ်က အတားအဆီးများကို အခြေခံဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ် ရှင်းလင်းဖယ်ရှားရန် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်သွားသင့်ကြောင်းနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် စီးပွားရေးလုပ်ရန် ကြုံတွေ့ရသော အခက်အခဲများကို ဖယ်ရှားပေးခြင်း ၊ နိုင်ငံတွင် ကောင်းမွန်သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပတ်ဝန်းကျင် ဖန်တီးပေးခြင်း နှင့် အားလုံးသောဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းဖြင့် စွဲဆောင်သင့်ကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် ဝန်ကြီးချုပ်က နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ကာလရှည်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာ ထုတ်ပေးရေး ကြုံတွေ့နေရသော အတားအဆီးများကို ချက်ချင်းဖြေရှင်းပေးရန်လည်း သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနအသီးသီးသို့ လမ်းညွှန်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
Keyword – #Pakistan, #CPEC, #China, #PM, #Xinhua, #Xinhuamyanmar, #ဆင်ဟွာ
ISLAMABAD, May 24 (Xinhua) — Pakistani Prime Minister Imran Khan said on Sunday that the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) will bring economic development not only for Pakistan but also for the entire region, according to the Prime Minister Office.
The prime minister also directed the concerned departments to take immediate steps to eradicate obstacles in the issuance of long-term visas to foreign investors, especially Chinese investors, according to the statement.Photo taken on Nov. 18, 2019 showsaview of the expressway section of the Karakorum Highway (KKH) project phase two in Pakistan. (Xinhua/Liu Tian)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားများက တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး ပို၍နှစ်သက်ကြကြောင်း စစ်တမ်းတွင် ဖော်ပြ